ထိုင်းက ပရိတ်သတ် တွေ အတွက် ပိုင်တံခွန် ရဲ့ ထိရောက် လှ တဲ့ အကူအညီ တောင်းခံမှု – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ထိုင်းက ပရိတ်သတ် တွေ အတွက် ပိုင်တံခွန် ရဲ့ ထိရောက် လှ တဲ့ အကူအညီ တောင်းခံမှု
ထိုင်းက ပရိတ်သတ် တွေ အတွက် ပိုင်တံခွန် ရဲ့ ထိရောက် လှ တဲ့ အကူအညီ တောင်းခံမှု
By Ga MonePosted on February 25, 2021
ချစ်လှစွာသော ထိုင်းလူမျိုးများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ရောက် မြန်မာလူမျိုးများခင်ဗျား စစ်ဘက်ကနေ လာပြီး အရပ်သားရွေးကောက်မခံရတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘန်ကောက်ကို ဒီနေ့ အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံမယ် တပ်မတော်ဘက်က ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပဖို့ ဘန်ကောက်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့ ဒေသခံအရင်းအမြစ်အရ သိရပါတယ်။
ဒါမျိ ုးငါတို့လက်မခံဘူး. ငါတို့တကယ် လိုချင် တဲ့သူကို မဲပေးပြီးပြီ။ သူတို့တွေက ငါတို့ရဲ့ မဲ ကို လေးစားရမယ်။မြန်မာနဲ့ ထိုင်းမှာ ဒီမိုကရေစီ အစစ်အမှန် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ စာမျက်နှာတစ်ခုထဲမှာပါလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါဆို တရားမဝင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကို ကိုယ်စား မပြုတဲ့ ဆန္ဒပြကြပါ။
မင်းရဲ့ လှပတဲ့မြေကို လာပြီးတော့ ဒီလုပ်ရပ်က စစ်အာဏာရှင်တွေကိုလက်တွေ နဲ့ ဆက်လက် တိုက်ခိုက်ဖို့ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြီးတော့ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ကမ္ဘာမြေပေါ်က လူတွေအားလုံးကို မေတ္တာတွေ ဖြန့်ဝေပေးနေပါတယ်။
ခ်စ္လွစြာေသာ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားခင္ဗ်ား စစ္ဘက္ကေန လာၿပီး အရပ္သားေ႐ြးေကာက္မခံရတဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဘန္ေကာက္ကို ဒီေန႔ အင္ဒိုနီးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံမယ္ တပ္မေတာ္ဘက္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပန္လည္က်င္းပဖို႔ ဘန္ေကာက္မွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ရွိတယ္လို႔ ေဒသခံအရင္းအျမစ္အရ သိရပါတယ္။
ဒါမ်ိ ုးငါတို႔လက္မခံဘူး. ငါတို႔တကယ္ လိုခ်င္ တဲ့သူကို မဲေပးၿပီးၿပီ။ သူတို႔ေတြက ငါတို႔ရဲ႕ မဲ ကို ေလးစားရမယ္။ျမန္မာနဲ႔ ထိုင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ အစစ္အမွန္ တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုထဲမွာပါလို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ဒါဆို တရားမဝင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကို ကိုယ္စား မျပဳတဲ့ ဆႏၵျပၾကပါ။
မင္းရဲ႕ လွပတဲ့ေျမကို လာၿပီးေတာ့ ဒီလုပ္ရပ္က စစ္အာဏာရွင္ေတြကိုလက္ေတြ နဲ႔ ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ဖို႔ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အတြက္တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ ကမာၻေျမေပၚက လူေတြအားလုံးကို ေမတၱာေတြ ျဖန႔္ေဝေပးေနပါတယ္။
Previous post ပြည်သူတွေ အ တွက် နာရေး ကူညီမှု အသင်း ရန်ကုန် ရဲ့ ပြတ်သားလွန်းတဲ့ ရပ်တည်ချက်
Next post ဒေါက်တာဆာဆာ ကတော့ သတင်းကောင်း ပါး လိုက်ပြီ (ဝင်သာ ဖတ်ကြည့်တော့ဗျာ)……